မိနျးမသားတို့ ရငျဖှငျ့ရာ Group မှာ လာရောကျရငျဖှငျ့ထားတဲ့ ရငျဖှငျ့စာ (၇) - Tameelay
မိနျးမသားတို့ ရငျဖှငျ့ရာ Group မှာ လာရောကျရငျဖှငျ့ထားတဲ့ ရငျဖှငျ့စာ (၇)
မိနျးမသားတို့ ရငျဖှငျ့ရာ Group မှာ လာရောကျရငျဖှငျ့ထားတဲ့ သမီးလေးတဈယောကျရဲ့ ရငျဖှငျ့စာလေးတှေ မြှဝခေဲ့တာဆိုရငျ အမှတျစဉျလေးတှနေဲ့ (၆) ထိပွီးခဲ့ပါပွီ . . .
အခု အမှတျစဉျ (၇) အနနေဲ့ သမီးလေးတဈယောကျ ရငျဖှငျ့ထားတာကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော . . .
ညီမကညီမကောငျလေးနဲ့ခဈြသူသကျတမျး5နှဈကြျောခဲ့ပါရှိရှငျ့ ညီမအတှကျတော့သူကညီမပထမဆုံးခဈြခဲ့တဲ့ယောကျြားတဈယောကျပါ ညီမတို့နှဈယောကျကအရမျးခဈြကပြါတယျရှငျ့
သူကလဲညီမကိုအရမျးခဈြပါတယျ ညီမတို့ခဈြသူသကျတမျး5လကြျောလောကျဆိုသူကသူ့အိမျနဲ့မိတျဆကျပေးတယျညီမကို 1နှဈကြျောလောကျရောကျတဲ့အခါကတြော့သူ့အိမျကိုအလညျချေါတယျညီမလဲလိုကျသှားတယျပေါ့နော
သူ့မိဘသူ့အသိုငျးအဝိုငျးကလဲညီမကိုဆိုအရမျးခဈြကတြယျရှငျ့ သူ့မိဘတှကေလဲညီမကိုဆိုသမီးအရငျးလိုကိုခဈြပေးဂရုစိုကျကတြယျ သူနဲ့ညီမနဲ့ကလကျထပျဖို့ထိလဲရညျရှယျထားကတြယျ ညီမလဲညီမအိမျကိုချေါပီးညီမမိဘတှနေဲ့မိတျဆကျပေးခဲ့တယျ
ညီမတို့ခဈြသူသကျတမျး2နှဈကြျောလောကျမှာပေါ့နောညီမကသူ့အိမျကိုအလညျလိုကျသှားတယျ အဲမှာရောကျတော့သူကသူ့ငယျခငျြးတနေဲ့သောကျကတြယျပေါ့နော ညီမကလဲသူ့သူငယျခငျြးတနေဲ့အရမျးရငျးနှီးတော့သူတို့နားမှာနပေီးဇာတျကားကြိနတောပေါ့
အဲဒါကိုသူကစိတျဆိုးပီသူ့သူယျခငျြးတရှေမှေ့ာညီမကိုရိုကျတယျ ညီမလဲအရမျးအံ့ဩသှားတာပေါ့နောငါ့ကိုအဲလိုလုပျရကျတယျဆိုပီးး နောကျတော့သူပွနျခြော့တောငျးပနျတာနဲ့ခှငျ့လှတျပေးပီပွနျအဆငျပွသှေားကတြယျ
သူ့မိတှကေတော့အားပေးဂရုစိုကျကပြါတယျသူအဲလိုလုပျတော့ရဲတိုငျမယျဘာညာနဲ့သူ့အဖကေ ညီမကိုအရမျးခဈြကပြါတယျ ညီမကိုလဲအိမျပွနျဆိုပီးတော့သူကလိုကျပို့တယျကားဂိတျကို ပွနျတဲ့လမျးမှာသူကအမှားလုပျမထားသလိုဘဲညီမကိုအရငျလိုဂရုစိုကျပွနတေယျ
ညီမကသူတောငျးပနျမလားလို့စောငျ့နတောနောကျတော့သီးမခံနိုငျတော့တာနဲ့လမျးခှဲရအောကျပွောတော့ သူကရတယျတဲ့ ညီမလသေမေလိုဘဲခံစားရတာာ သူလုံးဝသူမှားပါတယျဝနျမခံသလိုနောငျတလဲရပုံမပျေါဘူး
ညီမလဲအရမျးကွောကျသှားတယျနောကျတော့ညီမကဘဲမပွတျနိုငျ‌တော့သူ့ကိုအရငျစဆကျသှယျတောငျးပနျပီးပွနျအဆငျပွခေဲ့ကတြယျ သူလဲညီမအပျေါကောငျးပေးခဲ့တာတအေမြားကွီးပါ အာ့ကွောငျ့လဲမပွတျနိုငျလို့သူ့ကိုတောငျးပနျခဲ့တာာ
ညီမသှားရတဲ့အဓိကကပေါ့နောညီမသူ့အနားမရှိရငျသူညီမတနျဖိုးကိုနားလညျလာမှာဆိုပီး ခနထှကျသှားခငျြခဲ့တာ အဲဒါနဲ့ညီမထှကျလာခဲ့တယျ
ညီမထှကျလာပီးစငျကာပူရောကျတော့တဈပတျလောကျကအဆငျပွသေေးတယျ နောကျတော့ကြောငျးဖှငျ့တယျ ကြောငျးသှားရတယျအလုပျလဲလုပျတော့ညီမလဲအရငျလိုအခြိနျပေးမရတော့ဘူးသူ့ကိုဒါမဲ့ညီမကမိုးလငျးတာနဲ့အိပျယာနိုးပီဘယျသှားပီဘာလုပျတယျကစအကုနျစာပို့ပွောပွVCချေါပီးတော့ပွအဲလိုလုပျတယျဒါပမေဲ့သူလုံးဝနားလညျမပေးခဲ့ဘူးအရမျးစျောကားခဲ့တယျ ညီမကြောငျးကလူတအေလုပျကလူတနေဲ့အကုနျပေးစားတယျ
အလုပျကမောမောပငျပငျပနျးပနျးနဲ့ပွနျလာရတိုငျးဘယျတော့မှစိတျမခမျြးသာရဘူးမကျြရညျနဲ့မကျြခှကျအခြိနျတိုငျးဘဲနတေို့ငျးဘဲ နှဈလကြျောကြျောလောကျထိညီမသီးခံခဲ့တယျ အရမျးပငျပနျးပီးတော့လိုငျးပျေါမှာတခွားလူနဲ့ကွူမိသှားတယျ အဲဒါကိုလဲသူသိသှားတယျ
အဲမှပွသနာတတေကျ ပွတျလိုကျဆကျလိုကျပွတျလိုကျဆကျလိုကျနဲ့ အဆငျပွသှေားရငျအဲကိစ်စကိုအစဖျောပီးပွသနာဘဲရှာတယျ သူညီမကိုလုံးဝမပွတျနိုငျဘူးဆိုတာညီမသိတယျ ညီမလဲမပွတျနိုငျဘူး
ညီမတတျနိုငျတာအားလုံးလုပျပေးတယျ သူအမှားတအေမြားကွီးရှိတာတောငျညီမကအပွဈမမွငျဘဲခှငျ့လှတျပေးနိုငျတယျ သူကတော့အဲ့အကွောငျးကိုဘဲ ခနခနပွသနာရှာပီးညီမကိုဆဲဆိုစျောကားတယျ
အခုညီမပွနျတော့မလို့ သူကပွနျလာရငျလကျထပျဖို့ပွောတယျလကျထပျရမှာလားမသိတော့ဘူးရှငျ ညိမသူ့အကွောငျးသိတယျ
A : သခြောစဉျးစားဆုံးဖွတျနျော မိဘတှနေဲ့လညျးတိုငျပငျပါ sis လေးရေ
B : ကွောကျဖို့တော့ကောငျးတယျ သူကရောတကယျခဈြတယျလိျု့ထငျလား
C : ညီမလေးရေ မရခငျထဲကလကျပါတယျပီးရငျသူမှားနတေဲ့အမှားတှကေမြမွငျဘူးညီမမှားတဲ့တဈခကျြကိုပဲပွနျအစဖျောပီးတော့မူးရငျလဲသှေးဆိုးတကျတဲ့သူကို ညီမလေးတဈသကျလုံးဘယျလိုရငျဆိုငျမလဲစိတျခမျြးသာစရာကောရှိပါ့မလား မယူခငျထဲကသခြောစဉျးစားပါသံယောဇဉျကတော့ဖွတျရခကျပမေဲ့တဈသကျစာအတှကျသခြောစဉျးစားစခေငျြပါတယျ
D : ဗီဇဆိုတာဖြောကျမရဘူးလကေိုယျ့ကိုဘယျလောကျခဈြခဈြပွောငျးလဲလာမယျမထငျနဲ့သခြောစဉျးစားပါ
E : မယူပါနဲ့ ခဈြသူဘဝတောငျလကျပါနတော ဗီဇကဖြောကျလို့မရပါဘူး မူးတိုငျးလကျပါပွီး အရငျကိစ်စကိုပဲပွသနာရှာနမှော
Post တငျပွီး မိနဈ ၃၀ မှာ Comment (အကွံပေးမှု)ပေါငျး ၅၀ နီးပါးရှိပွီး အဲ့ထဲကမှ အနညျးစုကို ဖျောပွပေးလိုကျခွငျးဖွဈပါတယျ . . .
မိနျးမသားတို့ရငျဖှငျ့ရာ Group သို့ အဖှဲ့ဝငျခငျြတဲ့မိနျးမသားမြား Comment မှာ Group ဆိုပွီးရေးခဲ့ပေးပါ ။
မိန်းမသားတို့ ရင်ဖွင့်ရာ Group မှာ လာရောက်ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာလေးတွေ မျှဝေခဲ့တာဆိုရင် အမှတ်စဉ်လေးတွေနဲ့ (၆) ထိပြီးခဲ့ပါပြီ . . .
အခု အမှတ်စဉ် (၇) အနေနဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက် ရင်ဖွင့်ထားတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် . . .
ညီမကညီမကောင်လေးနဲ့ချစ်သူသက်တမ်း5နှစ်ကျော်ခဲ့ပါရှိရှင့် ညီမအတွက်တော့သူကညီမပထမဆုံးချစ်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါ ညီမတို့နှစ်ယောက်ကအရမ်းချစ်ကျပါတယ်ရှင့်
သူကလဲညီမကိုအရမ်းချစ်ပါတယ် ညီမတို့ချစ်သူသက်တမ်း5လကျော်လောက်ဆိုသူကသူ့အိမ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ညီမကို 1နှစ်ကျော်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်ကိုအလည်ခေါ်တယ်ညီမလဲလိုက်သွားတယ်ပေါ့နော
သူ့မိဘသူ့အသိုင်းအဝိုင်းကလဲညီမကိုဆိုအရမ်းချစ်ကျတယ်ရှင့် သူ့မိဘတွေကလဲညီမကိုဆိုသမီးအရင်းလိုကိုချစ်ပေးဂရုစိုက်ကျတယ် သူနဲ့ညီမနဲ့ကလက်ထပ်ဖို့ထိလဲရည်ရွယ်ထားကျတယ် ညီမလဲညီမအိမ်ကိုခေါ်ပီးညီမမိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်
ညီမတို့ချစ်သူသက်တမ်း2နှစ်ကျော်လောက်မှာပေါ့နောညီမကသူ့အိမ်ကိုအလည်လိုက်သွားတယ် အဲမှာရောက်တော့သူကသူ့ငယ်ချင်းတေနဲ့သောက်ကျတယ်ပေါ့နော ညီမကလဲသူ့သူငယ်ချင်းတေနဲ့အရမ်းရင်းနှီးတော့သူတို့နားမှာနေပီးဇာတ်ကားကျိနေတာပေါ့
အဲဒါကိုသူကစိတ်ဆိုးပီသူ့သူယ်ချင်းတေရှေ့မှာညီမကိုရိုက်တယ် ညီမလဲအရမ်းအံ့ဩသွားတာပေါ့နောငါ့ကိုအဲလိုလုပ်ရက်တယ်ဆိုပီးး နောက်တော့သူပြန်ချော့တောင်းပန်တာနဲ့ခွင့်လွတ်ပေးပီပြန်အဆင်ပြေသွားကျတယ်
သူ့မိတွေကတော့အားပေးဂရုစိုက်ကျပါတယ်သူအဲလိုလုပ်တော့ရဲတိုင်မယ်ဘာညာနဲ့သူ့အဖေက ညီမကိုအရမ်းချစ်ကျပါတယ် ညီမကိုလဲအိမ်ပြန်ဆိုပီးတော့သူကလိုက်ပို့တယ်ကားဂိတ်ကို ပြန်တဲ့လမ်းမှာသူကအမှားလုပ်မထားသလိုဘဲညီမကိုအရင်လိုဂရုစိုက်ပြနေတယ်
ညီမကသူတောင်းပန်မလားလို့စောင့်နေတာနောက်တော့သီးမခံနိုင်တော့တာနဲ့လမ်းခွဲရအောက်ပြောတော့ သူကရတယ်တဲ့ ညီမလေသေမလိုဘဲခံစားရတာာ သူလုံးဝသူမှားပါတယ်ဝန်မခံသလိုနောင်တလဲရပုံမပေါ်ဘူး
ညီမလဲအရမ်းကြောက်သွားတယ်နောက်တော့ညီမကဘဲမပြတ်နိုင်‌တော့သူ့ကိုအရင်စဆက်သွယ်တောင်းပန်ပီးပြန်အဆင်ပြေခဲ့ကျတယ် သူလဲညီမအပေါ်ကောင်းပေးခဲ့တာတေအများကြီးပါ အာ့ကြောင့်လဲမပြတ်နိုင်လို့သူ့ကိုတောင်းပန်ခဲ့တာာ
ညီမသွားရတဲ့အဓိကကပေါ့နောညီမသူ့အနားမရှိရင်သူညီမတန်ဖိုးကိုနားလည်လာမှာဆိုပီး ခနထွက်သွားချင်ခဲ့တာ အဲဒါနဲ့ညီမထွက်လာခဲ့တယ်
ညီမထွက်လာပီးစင်ကာပူရောက်တော့တစ်ပတ်လောက်ကအဆင်ပြေသေးတယ် နောက်တော့ကျောင်းဖွင့်တယ် ကျောင်းသွားရတယ်အလုပ်လဲလုပ်တော့ညီမလဲအရင်လိုအချိန်ပေးမရတော့ဘူးသူ့ကိုဒါမဲ့ညီမကမိုးလင်းတာနဲ့အိပ်ယာနိုးပီဘယ်သွားပီဘာလုပ်တယ်ကစအကုန်စာပို့ပြောပြVCခေါ်ပီးတော့ပြအဲလိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူလုံးဝနားလည်မပေးခဲ့ဘူးအရမ်းစော်ကားခဲ့တယ် ညီမကျောင်းကလူတေအလုပ်ကလူတေနဲ့အကုန်ပေးစားတယ်
အလုပ်ကမောမောပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ပြန်လာရတိုင်းဘယ်တော့မှစိတ်မချမ်းသာရဘူးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်အချိန်တိုင်းဘဲနေ့တိုင်းဘဲ နှစ်လကျော်ကျော်လောက်ထိညီမသီးခံခဲ့တယ် အရမ်းပင်ပန်းပီးတော့လိုင်းပေါ်မှာတခြားလူနဲ့ကြူမိသွားတယ် အဲဒါကိုလဲသူသိသွားတယ်
အဲမှပြသနာတေတက် ပြတ်လိုက်ဆက်လိုက်ပြတ်လိုက်ဆက်လိုက်နဲ့ အဆင်ပြေသွားရင်အဲကိစ္စကိုအစဖော်ပီးပြသနာဘဲရှာတယ် သူညီမကိုလုံးဝမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာညီမသိတယ် ညီမလဲမပြတ်နိုင်ဘူး
ညီမတတ်နိုင်တာအားလုံးလုပ်ပေးတယ် သူအမှားတေအများကြီးရှိတာတောင်ညီမကအပြစ်မမြင်ဘဲခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တယ် သူကတော့အဲ့အကြောင်းကိုဘဲ ခနခနပြသနာရှာပီးညီမကိုဆဲဆိုစော်ကားတယ်
အခုညီမပြန်တော့မလို့ သူကပြန်လာရင်လက်ထပ်ဖို့ပြောတယ်လက်ထပ်ရမှာလားမသိတော့ဘူးရှင် ညိမသူ့အကြောင်းသိတယ်
A : သေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နော် မိဘတွေနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပါ sis လေးရေ
B : ကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ် သူကရောတကယ်ချစ်တယ်လို့်ထင်လား
C : ညီမလေးရေ မရခင်ထဲကလက်ပါတယ်ပီးရင်သူမှားနေတဲ့အမှားတွေကျမမြင်ဘူးညီမမှားတဲ့တစ်ချက်ကိုပဲပြန်အစဖော်ပီးတော့မူးရင်လဲသွေးဆိုးတက်တဲ့သူကို ညီမလေးတစ်သက်လုံးဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲစိတ်ချမ်းသာစရာကောရှိပါ့မလား မယူခင်ထဲကသေချာစဉ်းစားပါသံယောဇဉ်ကတော့ဖြတ်ရခက်ပေမဲ့တစ်သက်စာအတွက်သေချာစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်
D : ဗီဇဆိုတာဖျောက်မရဘူးလေကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ချစ်ချစ်ပြောင်းလဲလာမယ်မထင်နဲ့သေချာစဉ်းစားပါ
E : မယူပါနဲ့ ချစ်သူဘဝတောင်လက်ပါနေတာ ဗီဇကဖျောက်လို့မရပါဘူး မူးတိုင်းလက်ပါပြီး အရင်ကိစ္စကိုပဲပြသနာရှာနေမှာ
Post တင်ပြီး မိနစ် ၃၀ မှာ Comment (အကြံပေးမှု)ပေါင်း ၅၀ နီးပါးရှိပြီး အဲ့ထဲကမှ အနည်းစုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် . . .
မိန်းမသားတို့ရင်ဖွင့်ရာ Group သို့ အဖွဲ့ဝင်ချင်တဲ့မိန်းမသားများ Comment မှာ Group ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါ ။
Categories Tameelay Knowledge Tags 04 Post navigation
(၄-၅-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ရောဂါစောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ သတငျးထုတျပွနျခွငျး
မိနျးမသားတို့ ရငျဖှငျ့ရာ Group မှာ လာရောကျရငျဖှငျ့ထားတဲ့ ရငျဖှငျ့စာ (၈)